Ụwa ruo ugbu a - akụkọ kacha mma TAA
Otu nwata nwoke dị afọ 14 kụrụ agụ iyi n’ihu ka ọ gbanarị mgbe anụ ọhịa ahụ kpọchiri nwa ahụ n’agba n’agba ma nwaa ịdọkpụrụ ya ka ọ nwụọ.
June 2, 2022 site admin
Otu onye nọ n'afọ iri na ụma ji ọrụ ebube gbanarị agba nke agụ iyi site n'iti ya n'isi. Om Prakash Sahoo, 14, na ndị enyi ya nọ na osimiri Kani dị n'India mgbe anụ ọhịa ahụ dọwara ya n'okpuru mmiri wee dọkpụrụ ya ruo ọnwụ. 1 Onye ntorobia ahu jisiri ike gbanari n'agba agụ iyiEbe E Si Nweta: Alamy... gụkwuo
Categories Akụkọ ikpeazụ Tags afọ iri na ụma, afọ, dọkpụrụ ya, Anụmanụ, ụzọ, agu iyi, mgbe, na-emechi, n'etiti, gbalaga, jaws, kụrụ, n'ebe, ọnwụ, nwa, na, Gị, emeso ya Deja un comentario
Otu onye nọ n’afọ iri na ụma ji ọrụ ebube gbanarị agba nke agụ iyi site n’iti ya ọkpọ n’isi. Om Prakash Sahoo, 14, na ndị enyi ya nọ na osimiri Kani dị n'India mgbe anụ ọhịa ahụ dọwara ya n'okpuru mmiri wee dọkpụrụ ya ruo ọnwụ. 1 Nwa okorobịa ahụ jisiri ike gbanarị n’agba nke… gụkwuo
M gbapụrụ n’ezinụlọ Amish bụ́ ezigbo nna m mgbe m dị afọ iri na asatọ
Nne nke a zụlitere na Amish ekpughere ka e si kpaso ụmụ nwanyị na ụmụaka mmeso ọjọọ dị egwu ma "jụ" site na ezinụlọ ha ma ọ bụrụ na ha mebiri iwu. Mgbe Emma Gingerich dị afọ 36 gbapụrụ naanị ndụ ọ ga-amabu mgbe ọ dị afọ iri na asatọ, ọ gụrụ akwụkwọ na klas nke itoolu... gụkwuo
Categories Akụkọ ikpeazụ Tags Amish, afọ, mgbe, mgbapụ, Familia, onye ikwu, Enwere m Deja un comentario
Ihe omimi dị ka onye injinia Britain dị afọ 37 gbagburu ya na ndị enyi ya abụọ n'otu nnukwu ụlọ ahịa Mexico ka ọ na-azụ ahịa.
Egburu otu nwoke Briten n'otu nnukwu ụlọ ahịa dị na Mexico ya na ndị enyi ya abụọ mgbe nne na nna ya nwere nkụja kwuru na ọ 'nọ n'ebe na-ekwesịghị ekwesị n'oge na-ekwesịghị ekwesị'. A gbara onye injinia software Ben Corser, 37, onye Cornwall, ka ọ na-agba ọsọ na Colima, ọdịda anyanwụ Mexico, na… gụkwuo
Categories Akụkọ ikpeazụ Tags amigos, afọ, gburu, Onye Britain, dị ka, zụtara, con, azụ, engineer, Onye Mexico, mgbe, ihe omimi, nnukwu ụlọ ahịa, agbapụ Deja un comentario
Shark 'Zombie' na-awakpo centimita anụ anụ site na onye na-egwu mmiri juru
Ọ bụ oge na-atụ egwu "zombie" shark wakporo sentimita anụ anụ ya site na onye na-egwu mmiri juru, ha niile na-ekwukwa otu ihe. Euan Rannachan, 36, nọ na Guadalupe Island, ihe dị ka kilomita 200 site n'ụsọ oké osimiri Mexico, mgbe nnukwu shark na-acha ọcha pụtara wee nọrọ na mmiri. … gụkwuo
Categories Akụkọ ikpeazụ Tags ọgụ, juru ya anya, diver, sentimita, presa, nkịta, ZOMBIE Deja un comentario
A gwọchara Putin maka 'ọrịa kansa dị elu n'April' dịka 'ọgwụgwụ nwere ike ịbịaru nso' maka onye ọchịchị aka ike Kremlin, ndị isi nledo US kwuru.
A gwọ ọrịa Vladimir Putin maka ọrịa kansa dị elu n'April, ndị isi nledo US kwuru. A kọrọ na ndị isi ndị isi kwuru na ndị enyemaka nọ na Kremlin "na-eche na njedebe dị nso" maka onye ọchịchị aka ike Russia dị afọ 69. 2 Onye isi ala Russia Vladimir PutinEbe E Si Nweta: AP 2Putin na Boris Titov, onye nnọchi anya… gụkwuo
Kedu ihe bụ rhinoplasty na gịnị bụ uru ya?
June 2, 2022 June 2, 2022 site admin
Maka ahụike ma ọ bụ ihe ịchọ mma, rhinoplasty bụ nhọrọ dị mma maka ịmegharị ma ọ bụ ịrụzi imi. Ọtụtụ ndị mmadụ na-atụgharị na usoro a iji dozie otu nsogbu imi. Ma gịnị kpọmkwem bụ na gịnị bụ isi uru? Edemede anyị taa bụ iji dokwuo anya… gụkwuo
Gịnị bụ merchandising na kedu ihe ọ bụ?
Uru ahịa ahịa na-agabiga n'ịchọ, ebe ọ bụ na a chọrọ usoro ndị na-enye aka n'ihe a na-achọsi ike imezu. Taa, ịzụ ahịa na-eji ihe ọmụma dị iche iche anabatara kemgbe ọtụtụ afọ iji kpalie ịzụrụ ndị ahịa. Ahịa maka ụlọ ọrụ bụ… gụkwuo
Barack Obama na-edu Platinum Jubilee ụtụ maka Queen si gburugburu ụwa ka Pope na Macron na-eziga ozi
BARACK Obama kwuru na eze nwanyị "chetara m nne nne m" ka ndị mmadụ si gburugburu ụwa kelere eze ahụ maka ndekọ afọ 70 ọ nọkwasịrị n'ocheeze. Onye dị afọ 96 bụ eze Britain mbụ mere mmemme jubilii platinum na ndị na-akwado eze n'ụwa niile nwere ... gụkwuo
Mama m jiri onye nleba anya tiketi na mmadụ atọ ndị ọzọ dinara n'ụgbọ okporo ígwè mgbe a ratachara ya na klas nke mbụ
E boro otu onye nleba anya tiketi na ndị ikom atọ ndị ọzọ dinara otu MOM n'ike n'ime ụgbọ oloko mgbe a rapachara ya n'ụgbọala nke mbụ. Nne na-eto eto nke nwere ụmụ abụọ hapụrụ oche klas akụ na ụba ya ka e nyechara ya ụlọ nwere ntụ oyi n'oge ... gụkwuo
Peeji1 Peeji2 ... Peeji1.358 Ọzọ →
Ụwa ruo taa | 2022